Ikhaya leGadi eliseLwandle kwisitalato esiThulekileyo
Iflethi okanye indlu ekwi-complex (icondo) yonke sinombuki zindwendwe onguEmily
Ikhaya lethu linoxolo kwaye libekwe embindini-indawo efanelekileyo yokuba izibini okanye iintsapho ziphumle, zindwendwele usapho / izihlobo, kwaye zijonge zonke iilwandle ezisemantla ezinokunikezela. Kulula ngokwenene ukuhlala ngendawo ephantsi komhlaba, intendelezo kunye neendawo zokupaka kwindawo enobuhlobo, ibhloko encinci. Ukuhamba nje imizuzu emi-5 ukuya elunxwemeni / ukuqubha / ukuhamba kunye neevenkile, iivenkile zokutyela kunye neeresityu.
Yenzelwe ukuba uzive usekhaya ukusukela oko ungena, senze iinzame zokubonelela ngazo zonke izinto eziyimfuneko ukuze uphumle, okanye ube kude nekhaya.
Indawo inegumbi lokuhlala elinomoya elinendawo yokuhlala enefenitshala esebenzayo kunye nesitayile. Umgangatho ophantsi wendlu uvumela ukuphumla ngoxolo, uhambe kakuhle kwintendelezo enelanga ene-BBQ
Igumbi lokulala eliphambili libanzi, linebhedi engukumkanikazi, eyakhelwe kwiiwodrophu kunye nefeni yokupholisa yesilingi evumela ukulala ubusuku obumnandi.
Igumbi lokulala lesibini limiselwe njengeofisi yasekhaya kunye nendawo yokuphola, nangona kunjalo inebhedi yayo eyahlukileyo ephindwe kabini, ilungele isibini. Eli gumbi likwanayo nefeni elizolileyo yesilingi kwaye lakhiwe kwiiwodrophu
Ikhitshi iyasebenza, ineendawo zokupheka ezigcweleyo ezibandakanya ioyile, iziqholo, ityuwa + ipepile ukuze ungabi naxhala lokuzisa loo masuntswana kunye neebhobhu. Kukho umatshini wokuhlamba izitya kunye nomatshini wekofu ofanelekileyo, esiya kuthi kuwo sibonelele nge-espresso yomhlaba ukusuka kwikhefi yasekhaya.
Igumbi lokuhlambela licocekile kwaye liyasebenza, kwaye libandakanya iwasha kunye nesomisi
Ukuba ufuna uzive ukhululekile ukuthumela umyalezo okanye umnxeba kwaye siyazama ukukunceda.
Inombolo yomthetho: PID-STRA-27442
Hlola ezinye iindawo onokukhetha kuzo e- Manly